हाइकु तीन लाइनको जापनिज कविता हो भन्ने बाहेक अरु ज्ञान थिएन | सिमान्तMarginal हाइकु तीन लाइनको जापनिज कविता हो भन्ने बाहेक अरु ज्ञान थिएन – सिमान्तMarginal
रहर हुनु मात्र होइन, सिक्न पनि पाउनु झन धेरै रमाइलो कुरा हुंदोरहेछ। नेपालीमा त अलि अलि लेखिन्थ्यो, तर कता कता अङ्रेजिमा पनि धेरथोर लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागि रहन्थ्यो ! खास्सखुस्स लेखिन्थ्यो, भुपि शेरचनलेझैं कोर्दै फ्यालिन्थ्यो। किनभने अङ्रेजी कविताको जे ज्ञान हुनु पर्ने हो त्यो पटक्कै थिएन। जसरी नेपालीमा छन्दको कुरा आउंछ त्यसरिनै अङ्रेजिमा पनि फर्मको कुरा गरिन्छ। सेक्सपियरको सोनेट पनि एउटा छन्द हो, जसको शुरुवात इटलीबाट भएको कुरा क्याम्पसमा सेक्सपियरको बारेमा पढदा थाहा भएको थियो। अनि हाम्रा लक्ष्मी प्रशाद देवकोटा उनी प्रती असाधै प्रभावित भएको कुराले सेक्सपियरको ‘सोनेट’ कविता लेख्न चाहनेहरुका लागि मुख रसाउने बिषय हुनु स्वभाविकै हो।
जे होस बिना ज्ञान तलका दुई कबिता रचेको थिएँ, जे त होला भनेर इन्कस्कोमा पोस्ट गरेँ। अचम्म! राम्रै रेस्पोन्स आयो, अलिक उत्साहित भएँ। मलाई अहिले पनि यो कविता कुन छन्दमा पर्छ भनेर जानकारी छैन। कबिता पढन तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला-
त्यसैले कृपया सुझाव पाउँ है। यसैको तलको कमेण्ट फर्ममा भरी पठाउन सकिने छ।
त्यसको केही दिन पछि हाइकु को नाममा अर्को छोटो कविता पोस्ट गरिदिएँ। तर हाइकु तीन लाइनको जापनिज कविता हो भन्ने बाहेक अरु केही पनि पत्तो थिएन।
भ्यालेण्टाइन दिवसका तीन हाइकु-
इन्कस्कोमा पोस्ट गर्दै जाँदा एक धेरै बर्षजती वर्डप्रेसमा लाइक, फलोअर अनि शेयरको लागि त्यती ध्यान दीइएन. पोस्ट बढाउने तिर मात्रै ध्यान जान्थ्यो, तर सामाजिक संजालको नसालु यो शक्तिले न तान्ने कुरै थिएन। जे देखे पनि ब्लगमा पोस्ट गर्न मन लाग्छ। धेरै मानिसहरुले हरेक दिन कविता पोस्ट गर्ने गरेको पाएँं, रमाइलो लाग्यो।
अङ्रेजी कविताका छन्दहरुको अभ्यास
यसै बिचमा ”ब्लगिङ युनिभर्सीटी” नाम दिईएको त्यो आभियानमा ”Writing 201 : Poetry” सिक्ने मौका मिल्यो। यसै हप्तादेखि दश दिनमा दशवटा अङ्रेजी कविताका छन्दहरु अभ्यास गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रममा सहभागि भएँ। यसलाई सहजिकरण गर्ने काममा बेन हुबर्मन (Ben Huberman) निकै ब्यस्त देखिएकाछन। स्थानिय समय अनुसार बेनले रातको १२ बजेतिर नयाँ कार्यक्रम अनलाइनमा राखिदिन्छन, बिहान हात मामोबाइल पर्ने वित्तिकै कविता सोच्न सुरु हुन्छ। मैले यिनै बेनसँग सोधेँ -”अङ्रेजी र अधुनिक हाइकुमा ५-७-५ को सिमा भित्र बाँधिन पर्दैन, के यो कुरा साँचो हो ?” बेनले ”शत प्रतिशत साँचो हो” भने पछी भने आफुले विना जानकारी रचेको त्यो भ्यालेण्टाइन दिवसका तीन हाइकुले राम्रै रेस्पोन्स पाएको कुरा बल्ल चाल पाएँ।
सेसन शुरु भयो। तर मलाई भने हाइकु र सोनेटको ( ) प्यास ज्यादा थियो र खासगरी पाँचवटा छन्दहरु मात्र सिक्ने बिचार छ। अहिलेसम्म चारवटा सिकियो, अब निरन्तरता दिने कुरामात्र हो, हेरौँ कत्तिको सकिन्छ! ती चारवटा मध्ये यस प्रकार छन
CONCRETE or SHAPE or ANIMAL
कविताका पारखिहरुले ब्लग पोस्टमा गरेको कमेण्टहरुले त झन आनन्द आउँदो रहेछ।
उक्त सबै कविताहरु हेर्न यो लिंकमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ
Previous Postकृषिको होइन भ्रमको खेती : कसरी भयो नेपाल कृषि प्रधान देश!Next Postलाटाकोशेराहरु चमेराको रुखमा ठोकिए